Shir aan caadi ahayn oo ay yeelanayaan madaxda madasha qaran oo maanta ka furmaya Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Shir aan caadi ahayn oo ay yeelanayaan madaxda madasha qaran oo maanta ka furmaya Muqdisho
Waxaa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho uu ka furmo shir ay yeelanayaan madaxda madasha wadatashiga qaran, kaas oo la sheegayo in looga hadli doono geedi socodka qorshaha doorashooyinka Soomaaliya oo dhowr jeer hore uu dib u dhac ku yimid.
Qaar ka mid ah madaxda shirka maanta yeelanaysa ayaa ka mid ah musharixiinta sanadkaan u tartameeysa doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxdaasi ayaa loo arkaa inay si toos iyo si dadbanba ay faragelin baahsan ugu haayaan hanaanka doorashada dalka, iyadoona qaarkood la sheegayo inay ku kaceen musuq aad u baahsan iyo wax isdaba marin.
Shirka maanta furmaya ayaa sidoo kale looga hadli doonaa cabashada ay Puntland ka qabto doorashada xubnaha Aqalka sare ee gobolada waqooyi, iyadoo dhawaan hakad gelisay doorashooyinkii ka socday Garoowe.
Puntland ayaa sheegtay in labo ka mid ah xubnaha kasoo jeeda gobolada Sool iyo Sanaag ee Aqalka sare lagu soo doorto deegaanadeeda, balse aan lagu soo dooran magaalada Muqdisho.
Murankaaasi ayaa keentay inuu dib u dhac ku yimaado doorashadii Aqalka sare ee xubnaha kasoo jeeda gobolada waqooyi ee Somaliland, iyadoona la filaayo in arrinkaasi maanta xal laga gaaro.
Gelinka dambe ee maanta ayaa la filayaa in shirka madaxda madasha uu si toos ah uga bilawdo magaalada Muqdisho.
Shirkaan ayaa sidoo kale ka qeyb gali doonna xubno ka socda beesha caalamka, iyadoona markii uu shirkaan soo gaba-gaboobo qodobo dhowr ah laga soo saari doono.